Nhau - Laboratory ziso washer
Kunyangwe muzvikoro kana muzvipatara, marabhoritari anodiwa, uye nyaya dzekuchengetedza dzakanyanya kukosha uye kunetsekana. Matanho echimbichimbi anonyanya kukosha kana makemikari akapfapfaidzwa netsaona pamuviri kana pameso. Laboratory eyewash zvakare yakakosha yekuchengetedza michina. Sezvo iri yakakosha yekuchengetedza michina, kumisikidzwa kwerabhoritari eyewash inofanirawo kunyatso kuongororwa.
Laboratory eyewash inowanzo gadzirwa nesimbi isina simbi isina musono simbi pombi, uyezve tarisa murabhoritari iri chloride nemamwe makemikari anokuvadza. Kana chemakemikari ngura yakakura, iyo yekunze nzvimbo ye eyewash inofanira kunyorova neABS kana kurapwa kwepamusoro-kuita, kuitira kuti rabhoritari eyewash iwedzere kuora uye hupenyu hwebasa reye eyewash hunowedzerwa. Laboratory eye washer inogona kushandiswa kuchenesa kumeso, magirazi, mutsipa, maoko, nezvimwe. Kana iwe uchida kugeza muviri wese weziso washer, unogona kusarudza mukomboni weziso washer, kuchenesa zvakanyanya.
Bohua ziso rinosuka mudziyo mugadziri zvakanyatsoenderana neAmerican standard yekugadzira ziso yekuwacha mudziyo, ichinyanya kugadzirwa kwemeso ekugeza mudziyo kweanopfuura makore gumi, nekuvandudza, dhizaini, kugadzira, kutengesa seimwe yevagadziri. Nemafekitori akati wandei emakemikari ane kudyidzana, nekuda kwehunhu hwechigadzirwa uye mushure-yekutengesa sevhisi, yakahwina kurumbidza kwakaringana kwemutengi. Dhizaini uye gadzira dzinoverengeka dzemaziso ekuwachisa, anoshandiswa kune akati wandei ehunyanzvi patent. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezveBohua zvigadzirwa zveshuwa zvigadzirwa, unogona kutirovera runhare!